Onke amaWhite, abavumela namuhla eNkamba, bazofika kusasa ukuzoqondisa (ukufundisa izindaba ezingamanga) kubazukulu bakho ngemuva kokuba sebefunde zonke izimfihlo. Nayi ...	Funda kabanzi
Ngemuva kweminyaka eyi-9, ngesikhathi iKimbaguism ithola inkolo, abathembekile bafuna uKimbangu angcwatshwe emhlabeni wokhokho bakhe eNtamba. Le yindlela ...	Funda kabanzi
Le ndoda uJoseph Kabila owayengumengameli wayo oye wanikela kalula ilawulwa inombolo ye-5: yikuphi okufana nenombolo yesihlanu? Ezinhlanu ukumelela okuphelele ...	Funda kabanzi
Ngoba basilethele usizi, ukweba, amanga futhi babecekela phansi amasiko ethu, ukusenza sande futhi, singazijabuli, sizilulaze, sithumele kwamanye amazwe ...	Funda kabanzi
I-10 Septhemba 1921 eMbanza Nsanda, usizi luzolungiswa futhi intsha eningi izoshiya i-Afrika ngethemba lokufuna inhlala-kahle ezweni labamhlophe. Bazokhuluma njalo ...	Funda kabanzi
Ngaleso sikhathi, ubugqila base bugcwele ngokuphelele, kwakungumsebenzi wokuqala "wokuhweba" ngaphakathi kombuso. Nguye, uKimpa Vita okwakuthiwa ungowokuqala ukuvukela ...	Funda kabanzi
Aug06 11: 30